Festival International Madajazzcar 2020: sekoly fampianarana mozika maro no handray anjara | NewsMada
Festival International Madajazzcar 2020: sekoly fampianarana mozika maro no handray anjara
Rehefa natao ny dinika samihafa… Tapaka ny hevitra fa hotanterahina ny Madajazzcar 2020. Noho ny zava-misy eto Madagasikara sy any ivelany, somary hiova endrika ny hetsika tanterahina amin’ity taona ity
Iray amin’ireo hetsika kolontsaina manana ny maha izy azy eto Madagasikara mipaka hatrany ivelany ny Festival Madajazzcar. Hotanterahina ny 1 oktobra ka hatramin’ny 4 oktobra izao ny andiany faha-31 ka Antananarivo sy Antsirabe ary Ambositra no hanaovana izany. Noho ny valanaretina Covid-19 sy ireo fepetra ara-pahasalamana miaraka aminy, hanana ny mampiavaka azy ity Madajazzcar 2020 ity, raha ny nambaran’i Désiré Razafindrazaka filohan’ny komity mpikarakara ity hetsika kolontsaina lehibe ity.
Anisan’ny fiovana ho hita ny fandraisan’anjaran’ireo sekoly na foibe fampianarana mozika misy eto an-dRenivohitra. Ny mpampianatra sy ny mpianatra avy ao amin’ireny sekoly ireny no handray anjara. Anisan’izany ny sekoly ny Aria Academy Madagascar, ny Ecole de batterie Mendrika Rasolomahatratra, ny EGM (Ecole de Guitare et de Musique de Madagascar), ny Iarivo Art & Music Academy, ny Jejy Music Orchestra & Choir/ Jejy Kilonga, ny Laka Ensemble, ny Madagascar School of Music, ny Or’Maroloko, ny Section Musique, ny Axecom Studio, ny Sanfil Planeta Kolotoraly, ny Conservatoire National de Madagascar. Ao ihany koa ireo mpiangaly ny mozika jazz avy ao amin’ireo foibe kolotoraly tahaka ny AF Jazz (Alliance Française), ny Jazz Club CGM, sns.
Hisy ihany koa ny « Conférence-concert »
Hampiavaka ny Madajazzcar andiany faha-31 ity ihany koa ny fisian’ny « Conférence concert ». Hiompana amina famelabelaran-kevitra arahina fampisehoana ny fandaharam-potoana amin’izany. Izany hoe, lohahevitra voafaritra mazava no hofakafakain’ireo mpandaha-teny mandritra ny “Conférence concert” isanisany ka telo izy ireo no tafiditra ao anatin’ny fandaharam-potoana. Iray amin’ireo lohahevitra ireo ny : « Fandraisan’anjaran’ny kanto amin’ny fampivelarana ny olom-pirenena tsirairay ho tonga olom-banona ».
Nomarihin’i Désiré Razafindrazaka ihany koa fa noho ny hamehana ara-pahasalamana mihatra saika maneran-tany, tsy hanam-bahiny avy any ivelany ny Madajazzcar andiany faha-31. Na izany aza, nomarihiny fa tokony ho endrika iray hanehoan’ny Malagasy fa manana ny maha izy azy ny tontolon’ny jazz malagasy (mpandray anjara, mpijery…) ny tranga manokana tahaka izao.
Alefa mivantana amin’ny pejy facebok Festival Madajazzcar (Official) kosa ny seho fanokafana, ao amin’ny IFM Analakely, ny alakamisy 1 oktobra, manomboka amin’ny 7 ora hariva. Hiaka-tsehatra amin’izany ny BBK « Big Band Kely » tarihin’i Andry Mickaël Randriantseva, sy ny Weaver Trio feat. Joëlle Claude miaraka amin’i Njaka Rakotonirainy (piano), Josia Rakotondravohitra (amponga maroanaka), Hent’s Andriamasimanana (basse), ary i Joelle Claude (vocal). Ao Antsahamanitra kosa no hanatanterahana ny “Podium jazz”, ny asabotsy 3 oktobra.